नेपाल आउन र भारत जानका लागि सरकार ले लगायो यस्तो कडा नियम : एकपटक पढ्नैपर्ने ! – AB Sansar
नेपाल आउन र भारत जानका लागि सरकार ले लगायो यस्तो कडा नियम : एकपटक पढ्नैपर्ने !
November 19, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on नेपाल आउन र भारत जानका लागि सरकार ले लगायो यस्तो कडा नियम : एकपटक पढ्नैपर्ने !
काठमाडौं । कोरोना जो खिमका कारण भारतसंगको सिमानामा वार पार गर्न पनि अब नयाँ नियम लागू भएको छ । नेपालको पश्चिमी नाका भएर भारत जाने नेपालीलाई भारतीय प्रशासनले अनिवार्य रासनकार्ड हेरेर मात्रै प्रवेश अनुमति दिएको छ । पश्चिम क्षेत्रका नेपालीहरुको वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तब्य स्थल भारत हो । दशैं तिहार लगायतका मुख्य चाडपर्व सकिएपछि भारत रोजगारी गर्न जानेहरुको लर्को लाग्ने गरेको छ । *****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
त्यसैले गड्‍डाचौकी नाका भएर भारत जाने नेपालीहरुसँग भारतीय रासनकार्ड भए मात्रै उनीहरुलाई प्रवेश अनुमति दिन थालिएको छ । रासनकार्ड नभएकाहरु अब भारत जान पाउँदैनन् । रासनकार्ड नहुँदा कतिपय नेपाली भारतमा रोजगारीका लागि फर्किन पाएका छैनन् ।
यस्तै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयलाई समेत नेपाली प्रशासनले अनिवार्य पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट लागु गरेको छ । तर नेपाली नागरिकका हकमा भने पीसीआर अनिवार्य गरिएको छैन । तर भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपाली नागरिकलाई सीमाबाटै सोझै गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ ।*****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
कोरोना खोपमा सफलता मिले सङ्गै सुनको मूल्य घट्ने क्रम जारी आज फेरि ह्वात्तै घट्यो !
के सार्क अध्यक्ष नेपालले अफगानिस्तान मामिलामा भूमिका खेल्न सक्छ ?
March 20, 2021 santosh
खुशीको खबर: लकडाउन भर नेपाल टेलिकमले नमस्तेबाट नमस्ते कल फ्रि सेवा सुचारु गरेको छ ( सेवा सुचारु गर्ने तरिका तल दिइएको छ)